Ny bilaogera Iraniana sy ny resaka nokleary: tsy mila krizy intsony azafady! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2018 14:25 GMT
Ao amin'ny Webnevesht, nanoratra tao amin'ny bilaoginy amin'ny teny Anglisy ny filoha lefitra reformista teo aloha fa tsy naharesy lahatra ny firenena hafa momba ny programa nokleary Iraniana nandritra ny diany tany amin'ny Firenena Mikambana i Atoa Ahmadinejad. Araka ny nolazain'ity mpanao politika reformista sady bilaogera ity hoe:
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy amin'ny teny Farsi i Behnoud, mpanao gazety Iraniana avy any Londres, nandritra ny taona maromaro fa manohy ny adin'i Iran-Iraka tamin'ny taompolo 1980 ny mpitarika Islamika sasantsasany tamin'ny alàlan'ny famoronana ny fihetseham-po nasionaly na ara-pinoana teo amin'ny vahoaka. Ireo mpitondra ireo ihany no eo amin'ny fahefana ary mikasa ny hampiasa ny fomba toy izany mba hanentanana ny vahoaka ho amin'ity krizy nokleary ity. Nilaza izy avy eo fa miaina tontolo vaovao hafa isika ary tsy mety intsony ny fomba fiasa taloha .
Namerina ny Repoblika Islamika fa hanohy ny fandaharany amin'ny anaran'ny fitiavan-tanindrazana sy ny firenena Iraniana izy ireo. Abdi , mpanao politika reformista sady mpanao takalon'aina teo aloha tao amin'ny Masoivoho Amerikana tamin'ny taona 1979, nilaza fa nahoana no tsy misy olona manan-jo haneho ny heviny afa-tsy ny Fanjakana Iraniana raha firenena no resahana.
Angamba maro niara-niteny tamin’Atoa Behi, izay nonina tao amin'ny firenena nandritra ny adin'i Iran-Irak hoe,
Afa-mahita bilaogera toa an'i hajhamid, bilaogera pro-Hezbollah, manohana ny politikan'ny Repoblika Islamika amin'ny resaka nokleary isika. Naverin'izy ireo tao amin'ny bilaoginy dikanteny ofisialin'ny tantara.